चीन उच्च गुणस्तर हाइड्रोलिक नियन्त्रण भल्भ निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Hydrotech
टाइप गर्नुहोस्। भल्भ को प्रकार प्रणाली को काम विशेषताहरु अनुसार चयन गर्नुपर्छ। उदाहरण को लागी, मुख्य आधार को रूप मा पावर ट्रांसमिशन संग एक हाइड्रोलिक प्रसारण प्रणाली को लागी, साधारण हाइड्रोलिक नियन्त्रण भल्भ, सुपरइम्पोज्ड भल्भ वा कार्ट्रिज भल्भ चयन गर्न सकिन्छ। उच्च नियन्त्रण प्रदर्शन आवश्यकताहरु संग अवसरहरु को लागी, इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक नियन्त्रण भल्भ प्रयोग गरिन्छ। भल्भको प्रकार, स्पेसिफिकेशन र मिल्दो इलेक्ट्रिक कन्ट्रोल एम्पलीफायर उपकरण नियन्त्रण सामग्री, नियन्त्रण शुद्धता, प्रतिक्रिया विशेषताहरू, र actuator को स्थिरता अनुसार चयन गर्न सकिन्छ।
2. निर्दिष्टीकरण र मोडेलहरू
विभिन्न हाइड्रोलिक नियन्त्रण भल्भ विशिष्टता र मोडेलहरू, प्रणालीको अधिकतम दबाव र भल्भ मार्फत वास्तविक प्रवाहमा आधारित हुन सक्छ, र नियन्त्रण विशेषताहरू, स्थिरता र पोर्ट आकार, समग्र आकार, स्थापना र जडान विधिहरू, सञ्चालन विधिहरू, आदि विचार गर्नुहोस्। भल्भको, उत्पादन सूची वा म्यानुअलहरूबाट चयन गर्नुहोस्।
वास्तविक प्रवाह, मूल्याङ्कन गरिएको दबाव र मूल्याङ्कन गरिएको प्रवाह। हाइड्रोलिक नियन्त्रण भल्भको वास्तविक प्रवाह तेल सर्किटको श्रृंखला र समानान्तरसँग सम्बन्धित छ; श्रृंखला तेल सर्किट को सबै भाग को प्रवाह बराबर छ; एकै समयमा काम गर्ने समानान्तर तेल सर्किटको प्रवाह प्रत्येक तेल सर्किटको प्रवाहको योगफल बराबर हुन्छ। थप रूपमा, एकल-पिस्टन रड हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरू प्रयोग गर्ने प्रणालीहरूको लागि, पिस्टन विस्तार र फिर्ता लिँदा तेल फिर्ता प्रवाहमा भिन्नतामा ध्यान दिनु पर्छ।
प्रत्येक हाइड्रोलिक नियन्त्रण भल्भको मूल्याङ्कन गरिएको दबाव र मूल्याङ्कन गरिएको प्रवाह सामान्यतया यसको सञ्चालन दबाव र प्रवाहको नजिक हुनुपर्छ। उच्च विश्वसनीयता आवश्यकताहरूसँग प्रणालीहरूको लागि, भल्भको मूल्याङ्कन गरिएको दबाब यसको सञ्चालन दबाव भन्दा उच्च हुनुपर्छ। यदि मूल्याङ्कन गरिएको दबाव र मूल्याङ्कन गरिएको प्रवाह सञ्चालन दबाव र प्रवाह भन्दा कम छ भने, यसले सजिलै हाइड्रोलिक क्ल्याम्पिङ र हाइड्रोलिक पावर निम्त्याउँछ र भल्भको काम गर्ने गुणस्तरलाई प्रतिकूल असर गर्छ; प्रणालीमा अनुक्रम भल्भ र दबाव घटाउने भल्भको लागि, पासिंग प्रवाह मूल्याङ्कन गरिएको प्रवाह दर भन्दा धेरै कम हुनु हुँदैन, अन्यथा यो कम्पन वा अन्य अस्थिर घटना उत्पादन गर्न सजिलो छ। प्रवाह भल्भहरूको लागि, तिनीहरूको न्यूनतम स्थिर प्रवाहमा ध्यान दिनुहोस्।
स्थापना र जडान विधि, भल्भ स्थापना र जडान विधि को कारण, हाइड्रोलिक उपकरण संरचना को पछिल्लो डिजाइन एक निर्णायक प्रभाव छ।
मात्रा र संरचना। जब हाइड्रोलिक प्रणालीको कार्य प्रवाह 100l/min भन्दा कम हुन्छ, सुपरपोजिसन भल्भलाई पहिले चयन गर्न सकिन्छ, जसले तेल सर्किट ब्लकहरूको संख्यालाई धेरै कम गर्नेछ, जसले प्रणालीको भोल्युम र वजन कम गर्दछ; प्रणालीको कार्य प्रवाह 200l/min हो माथिका केसहरूमा, कारतूस भल्भ पहिले प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन कारतूस भल्भको फाइदाहरूको श्रृंखला हो जुन पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ; जब प्रणाली प्रवाह 100l-200l/min हुन्छ, परम्परागत प्लेट भल्भ रुचाइएको छ।
3. हाइड्रोलिक नियन्त्रण भल्भको अन्य नोटहरू
जब एउटै प्रकार्य हासिल गरिन्छ, उही स्पेसिफिकेशनहरू तर विभिन्न प्रकारका भल्भहरूको तुलनामा, परम्परागत प्लेट हाइड्रोलिक कन्ट्रोल भल्भको सबैभन्दा कम मूल्य हुन्छ, त्यसपछि सुपरइम्पोज्ड भल्भ हुन्छ, र कार्ट्रिज भल्भ उच्चतम हुन्छ। घरेलु सुपरपोजिसन भल्भ र कार्ट्रिज भल्भ उत्पादकहरूको वृद्धि र निरन्तर प्राविधिक विकाससँगै, मूल्य परम्परागत भल्भको नजिक हुनेछ।
सामानको आपूर्ति। परम्परागत भल्भको घरेलु उत्पादनको लामो इतिहास र धेरै निर्माताहरू छन्, र प्रविधि र प्रविधि अपेक्षाकृत परिपक्व छन्। त्यसैले सामानको आपूर्ति पर्याप्त र मूल्य कम भएको देखिन्छ ।
अरू। आधुनिक हाइड्रोलिक प्रणालीहरू थप जटिल हुँदै गइरहेका छन्। सामान्यतया हाइड्रोलिक प्रणालीमा धेरै सर्किट वा शाखाहरू हुन्छन्। प्रत्येक शाखाको प्रवाह र कामको चाप एउटै हुँदैन। यस अवस्थामा, यदि एउटै प्रकारको हाइड्रोलिक कन्ट्रोल भल्भ टाढाको र यान्त्रिक रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने कहिलेकाहीँ यो व्यावहारिक नहुन सक्छ। यस समयमा, यसलाई सम्पूर्ण रूपमा मान्न सकिन्छ। प्रणाली कार्य अवस्था को विशेषताहरु को अनुसार, भल्भ को धेरै प्रकार को मिश्रित र चयन गर्न सकिन्छ (यदि त्यहाँ एक सर्किट छ, एक परम्परागत भल्भ प्रयोग गरिन्छ, र केहि सर्किट एक superimposed भल्भ वा एक कारतूस भल्भ हो)।
4. हाइड्रोलिक नियन्त्रण भल्भ को चयन
हाइड्रोलिक नियन्त्रण भल्भको चयन प्रणालीको अधिकतम दबाव र भल्भको माध्यमबाट वास्तविक प्रवाह, साथै वाल्वको सञ्चालन र स्थापना विधिहरूमा आधारित छ। ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू निम्न हुन्:
1. भल्भ मार्फत वास्तविक प्रवाह (पम्पको प्रवाह अनुसार होइन) चयन भल्भको मुख्य मापदण्डहरू मध्ये एक हो, र यो धेरै सानो हुन निर्धारण गर्न सकिँदैन। यदि भल्भको माध्यमबाट वास्तविक प्रवाह सानो हुन निर्धारण गरिन्छ भने, भल्भ साइज (क्षमता) धेरै सानो हुन चयन गरिनेछ, र भल्भको आंशिक दबाव हानि धेरै ठूलो हुनेछ, परिणामस्वरूप अत्यधिक तेलको तापक्रम र अन्य परिणामहरू। गम्भीर अवस्थामा, हाइड्रोलिक प्रणाली ठीकसँग काम गर्दैन।
2. हाइड्रोलिक कन्ट्रोल भल्भको कामको दबाब र प्रवाह दर यसको मूल्याङ्कन गरिएको मूल्य भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यदि प्रवाह नियन्त्रण भल्भको सञ्चालन दबाव र तरल खाना यसको मूल्याङ्कन मूल्य भन्दा बढि छ भने, यसले सजिलैसँग हाइड्रोलिक क्ल्याम्पिङ र हाइड्रोलिक पावर निम्त्याउँछ, जसले नियन्त्रण भल्भको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पार्छ।
3. थ्रोटल भल्भ र गति नियन्त्रण भल्भको न्यूनतम स्थिर प्रवाहले आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन भनेर बेवास्ता गर्नुहोस्। थ्रोटल भल्भको न्यूनतम स्थिर प्रवाह र गति नियन्त्रण भल्भ एक्चुएटरको न्यूनतम परिचालन गति हासिल गर्न सकिन्छ कि छैन भन्नेसँग सम्बन्धित छ, त्यसैले यसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। प्रवाहमा गति नियन्त्रण भल्भको नियन्त्रण शुद्धता सुनिश्चित गर्न (अर्थात, एक्चुएटरको गति), एक निश्चित दबाव भिन्नता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। साधारण गति नियन्त्रण भल्भ, यसको दबाव भिन्नता 0.5MPa भन्दा कम हुनु हुँदैन; उच्च परिशुद्धता गति नियन्त्रण भल्भ, यसको दबाव भिन्नता 1MPa को रूपमा उच्च छ। थप रूपमा, जब परिवेशको तापमान धेरै परिवर्तन हुन्छ, तापमान क्षतिपूर्तिको साथ गति नियन्त्रण भल्भ चयन गरिनु पर्छ।
4. सामान्य गति नियन्त्रण भल्भ सुरु हुँदा प्रवाह जम्प घटनालाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। यस प्रकारको प्रवाह जम्प घटनाले एक्ट्युएटरको गतिको स्थिरतालाई असर गर्नेछ। यस अन्तमा, अनुरूप उपायहरू लिनु पर्छ।
हट ट्याग: हाइड्रोलिक नियन्त्रण भल्भ, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, अनुकूलित, स्टक मा, चीन, मूल्य